Iindaba-Ezisetyenziselwa iSilinda seHydraulic
Isilinda esihamba ngesanti kubunzulu baphantsi ngokubanzi ibhekisa kwisilinda esisixhobo esifanelekileyo. Isilinda hydraulic luhlobo lwe hydraulic actuator esiguqula amandla e-hydraulic ukuba abe ngamandla oomatshini kwaye yenze intshukumo yomgama wekhompawundi (okanye iswitch motion). Ilula kubume kwaye ithembekile ekusebenzeni. Xa isetyenziselwa ukuqonda ukuphindaphinda, inokuphepha ukuncipha kwesixhobo, kwaye ayinayo imvume yokuhambisa, ke isetyenziswa ngokubanzi kwiinkqubo ezahlukeneyo zoomatshini bokubamba. Amandla okuvelisa isilinda ye-hydraulic ayalingana ngokuthe ngqo kwindawo esebenzayo yepiston kunye nolwahluko kumaxinzelelo kumacala omabini; isilinda esisebenza ngesanti kubunzulu baphantsi esenziwe ngombhobho wesilinda kunye nentloko yesilinda, ipiston kunye nepiston rod, isixhobo sokutywina, isixhobo sesixhobo kunye nesixhobo sokukhupha. Izixhobo ze-Buffer kunye ne-exhaust zixhomekeke kwisicelo esithile, ezinye izixhobo zibalulekile.
Ngokubanzi, yenziwe ngebhokisi yesilinda, intonga yesilinda (intonga yepiston) kunye namatywina. Ngaphakathi kwebhokisi yesilinda yahlulwe yangamacandelo amabini ngepiston, kwaye icandelo ngalinye linomngxunya weoyile. Ngenxa yokuba umlinganiselo wokucinezelwa kolwelo uncinci kakhulu, xa enye imingxunya yeoyile ingena kwioyile, kuya kuthi kutyatyulwe ipiston ukuze kuphume omnye umngxunya weoyile, kwaye ipiston iqhube intonga yepiston ukwandisa (ukurhoxisa) intshukumo, kungenjalo, isasebenza. Umgaqo osebenzayo wesilinda se-hydraulic, kuqala kwiinto zonke, izinto zayo ezintlanu ezisisiseko: i-1-cylinder barrel kunye ne-cylinder head 2-piston kunye ne-piston rod-3 yokutywina isixhobo isixhobo se-4-buffer 5-isixhobo sokukhupha. Umgaqo osebenzayo wohlobo ngalunye lwesilinda phantse uyafana. Thatha iJack yesikhokelo njengomzekelo, i-jack yeyona silinda yeoyile ilula. Ioyile ye-hydraulic ingena kwisilinda seoyile ngevalve enye kusetyenziswa isikhombisi soxinzelelo (incwadi yokuhambisa amanzi). Ngeli xesha, ioyile ye-hydraulic engena kwisilinda yeoyile ayinakubuyela umva kwakhona ngenxa yevalve enye, inyanzelisa intonga yesilinda ukuba inyuke, emva koko iqhubeke nokwenza ioyile ye-hydraulic ngokuqhubekayo ingene kwisilinda ye-hydraulic ngexesha lokusebenza, ukuze iqhubeke iphakama. Xa ufuna ukuthoba, vula i-hydraulic valve ukwenza ioyile ye-hydraulic ibuyele kwitanki yeoyile.
Lo ngowona mgaqo ulula wokusebenza ongatshatanga uphuculwe kwesi siseko
Isilinda seHydraulic sisetyenziswa ikakhulu kulayisha, kwisicoci, kwifolokhwe yokulahla inkunkuma, kwilori yokulahla inkunkuma, ibldldozer, iqonga lokuphakamisa, ilori yenkunkuma, itrektara yezolimo, njl.